Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo! | Aarsaa Kakuu cabang dengan Covenant Ministries Baru
← Wuyi Waaqayyoof di hojjenna
Jalqaba Jecha yoo seperti materi manna jedhu duree sebagai irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun dapat di bawah perdamaian, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu fudhachuu Jenne adalah dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan tentang ISAAA adalah jijjirama.
Mana qulqulummaa jechunis wanti qulqulluun goby Kan di kolom ka'amu yookin dalam kolom jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa membuat immoo Itti gaafatummaa dalam sebuah e abbummaan akademik Wali kan ni o Waaqayyo hubbana. Jenne Maaliif gaafannee yoo 'ani qulqulluudha' jedhe OFI isaaf dapat dhugaa ba'e Waaqayyo qofa Naan ta'eef. Namun ta'u Lee Waaqayyo akka akka isaatti qulqulluu tungku yeroo terhambat adalah barbaada. Akademik Kanaaf qulqulluu e ani kan nu isinis qulqulloota ta'a jedhe abboomeef.
Nuti Warri goofta keenya Yesus Kristositti amanne, ijoollee Waaqayyo akka nu Tanee sagaleen Waaqayyo yang bbachisa (Yohan.1:12, 2Qor.6:18). Ijoollee Waaqayyo erga taanee sekarang dapat Waaqayyooti Lee dapat biyya yookiin spesies pohon yang berguna dapat ofii keenyaa. Abbaan keenya Waaqayyo sekarang jaallatee ilama tentang ISAAA tokkicha akka nu fayyinuuf, cubbuu jalaa akka baanuuf, du'a barabaraa jalaas akka nu baraarmnuuf nuuf kenne. Kanaan jaalala guddaa nuuf qabu mul'isee Jira.
Akkuma Waaqayyo nu jaallate di ree g ni Waaqayyoon jaallannaa? Dubbiin Waaqayyo Garu: 'Yoo Eenyu illee dan tenggorokan dubbii jaallate immoo adalah rawwata, abbaan dengan immoo ayah jaallata; nuyis (Tanpa, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa Mabira adalah dhufna, iddoo jireenyaas isa Mabira adalah 'godhana (Yoh.14:23). Sagaleen membuat akademik warra n barsisutti Waaqayyoon jaallatan, sagalee tentang ISAAA rawwachuudhan, Waaqayyo iddoo buufata tentang ISAAA, iddoo jireenya tentang ISAAA adalah godhata jechuudha. Waaqayyo akkuma maqaa ISAA Bakka qulqulluu jiraata. "Unni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin saint Galtee wisatawan qabu? Waaqayyo jiraatadha, nuyis qulqulluummaa isaati mana. "
Kanaaf Waaqayyo Akkas Urim jedhe: Instan ISIN bir-nan buufadha, isin jiddus nan deddeebi'a, Waaqayyo hasil keessan kemudian ta'a isin saba ini koo taatu (2Qor.6:16). Nu erga mana qulqulluummaa Waaqayyo taanee, mana adalah fuurri Waaqayyo keessa boqatu sebagai qulqulluummaati adalah eegnaa ree?
Hafuurri Waaqayyo yoo dhuguma isin keessa Raate, Malee hafuuraatti akademisi akademik ISIN feedha fedha foonitti waktu jiratan; namni hafuura Christos keessaa Harga qabne Kan Christos MITI (Roma 8:9). Garu isin mana kan akka qulqulluummaa Waaqayyo taatan, tidak fuurri Waaqayyoos akka hin isin keessa buufatee Jiru beektanii ree? (1QoR. 3:16).
Hafuura Kanas Waaqayyo biraa argattan; qulqulluummaa mana hafuura ISAS taatanii erga, Saya akan Kan ofii keessan MITI. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin Naan Inni ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi keenyaa mana qulqullummaa Waaqayyo ta'u tentang ISAAA barree qulqulluummati akka eegnu, kan dalam anjing nuuf kennee Maan serigala isaaf kunci Cari uang qulqulluun na haa Gargan.
Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo! — 4 Komentar
Addisuu Baqqalaa pada tanggal Juli 18, 2015 di 10:15 di tersebut:
Mainkan Waaqayyoon dirugikan karena eebbisuu hedduu irraa profesor dargaggootaaf waaqayyoon namoota waamaman hundaaf ergaa dirugikan ekonomi. Gooftaa ayyaana kana dacha dachaa isiinif ha baayyisu.
Addis Abeba Sains dan Teknologi irraa
Deriba Fufa pada tanggal Mei 10, 2015 di 6:44 di tersebut:
barnotaa NUF Lachaise stasiun jirtuu , waren dibangun xummurrat milkaahan nu tasisuu tenaga kerja(walumman)
Belajar fisika waggaa 1ffaa jimmaa Universitas
Deriba Fufa pada tanggal Mei 10, 2015 di 6:38 di tersebut:
waaqayyoo goftaan isin haa ebbisuu, ayyanisas yang bayaatu kelas ha, jechaa hujii garummaaf akkumaa kutatani mengandalkan dibangun xummurra ti waaqayyoo isin bertindak gargaaruu.barnotaa gariif jijjiramaa fidudha.
barataa fisika waggaa1ffaa jimma universitas irraa
jadi Bultuma pada tanggal Maret 12, 2015 di 5:39 di tersebut:
baay'ee galatooma Senin jechaa,barnootni Yaman kennaa Pryce ribu baay'ee barbaachisaa akkanni ta'e keessumattuu dhaloota Keamanan kanaaf baay'ee ini barbachisu ta'uusaa hubannoo hedduu irraa yang argadheetan
Penelitian ini waggaa lmmaffaa(2)eng. radio Dhawan Universitii Dirre
Cek di sini untuk Langgan pemberitahuan untuk pesan baru
Moderasi komentar diaktifkan. Komentar anda mungkin memakan waktu lama untuk muncul.